Muqdisho: Khudbadii R/wasaare Gaas ee xuska 1-da July, maalinta Qaranimada Somaliya. – Radio Daljir
Muqdisho: Khudbadii R/wasaare Gaas ee xuska 1-da July, maalinta Qaranimada Somaliya.
Luulyo 1, 2011 12:00 b 0
Ref: XRW/Warsaxaafadeed 0006/06/11 Date: 01 July 2011
Khudbadda Ra?iisul Wasaaraha Soomaaliya ee munaasabada 1da Luulyo, Muqdisho 1da Luulyo 2011
Ku-Simaha Madaxweynaha, ahna Guddoomiyaha Baarlamaanka Soomaaliya
Taliyeyaasha Ciidanka Qalabka Sida,
Maamulka Gobolka Banaadir,
Kooxaha fanaaniinta soomaaliyeed,
Kooxda Muusikada Baanbeyda,
Bahda Saxaafadda Iyo Dhammaan marti sharafta ka soo qeybgashay xafladan 1da Luulyo,
Xornimada waxey ku timid naf hurid, halgan, geesinimo, isku-duubni, wadajir, midnimo iyo dadaal shacabka soomaaliyeed ay hal meel uga soo wada jeedeen. Geesiyaashii u huray naftooda in xoriyadda la helo waxaa ka go?neyd midnimo iyo wadajir waarta. Waxaa waajib nagu wada ah inaan xusno, oo aan qadarino dhammaan halgamayaashii naftooda u soo huray xuriyadda dalka Soomaaliya. Waxaan idinka codsanayaa inaan hal daqiiqo u istaagno oo aan wada xusno dhammaan geesiyaashii naftood hurayaasha ahaa.
Waxaa hubaal ah in haddii waddanku uusan geli laheyn marxalladaha 20kii sano ee u danbeysay oo aan ku weyney dowladnimadii, amnigii iyo kala danbeyntii, in waddanku uu maanta la tartami lahaa caalamka intiisa kale. Shaki iigama jiro in Dalkayagu uu meel wanaagsan mari lahaa haddii aan ka bad-baadi laheyn burburkii iyo dowlad la?aantii 20kii sano ee ugu danbeeyey. Sidaas daraadeed, waxaan ugu baaqayaa dhalinyarada soomaaliyeed inay u istaagaan sidii aan waddankeena u badbaadin laheen oo aan u soo celin laheyn sharaftii, amnigii, kala danbeyntii, dowladnimadii iyo sidii ay ummadda ay aayahooda uga tashan lahaayeen. Ummadda soomaaliyeed waxaa maanta u muuqda ifafaallo iyo rajo wanaagsan oo aan ku badbaadin karno calankeena, sharafteena, midnimadeena iyo dowladnimo waarta.
Waxaan halkan rabaa inaan u mahadceliyo geesiyaasha ciidanka qalabka sida ee Soomaaliyeed oo difaac adag iyo heegan joogta ah kujira oo maanta dagaal kula jira kooxaha nabad diidka ah ee hortaagan shacabka soomaaliyeed inay aayahooda ka tashadaan. Xukuumadeyda waxaa ka go?an in mudnaanta koowaad ay siiso amniga, si loo soo celiyo kala danbeyntii, sharaftii iyo dowladnimadii. Waa in dhammaan shacabka soomaaliyeed ay nagala qeybqaataan halgankan aan ku soo ceshaneyno sharaftii iyo qaranimadii dalka.
Maalmahan danbe waxaa iyana soo kordhay tirada dadka ka soo cararaya goobaha ay Al-Shabaab ka taliyaan oo u soo cararaya magaalada Muqdisho oo ay ka muuqato macluul aad u baahsan. Shacabkayaga waxaa isagu darsoomay abaaro iyo Al-Shabaab oo ka hor istaagay gargaarkii bani?aadanimo. Sidaas daraadeed, Waxaan dhammaan ganacsatada, qurbojoogta iyo shacabka soomaaliyeed ugu baaqayaa inay wallaalahood dhibaateysan la soo gaaraan gurmad deg-deg ah. Sidoo kale, beesha caalamka waxaan ugu baaqayaa inay si deg-deg ah ay ummadda soomaaliyeed u soo gaaraan si loo badbaadiyo shacabka soomaaliyeed ee u dhimanaya gaajo iyo abaaro joogta ah.